Yoweri Museveni” Al Shabab Uganda ma soo weerari karaan”
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo wareysi siinayay wakaalada Reuters ayaa waxaa uu ka hadlayay arimo ay kamiyd yihiin heshiis dowladiisa ay lagashay dowladda Shiinaha oo ah dhismaha dhuumo shidaal oo dhulka hoosmara.
Gaari Waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qabtay Magaalada Kampala
Ciidamada booliiska Dalka Uganda ayaa shaaciyay in ay gacanta ku dhigeen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la doonayay in lagu qarxiyo goobo aan la cayimin oo katirsan Magaalada Kampala ee Caasimada Dalkaasi.
Feejignaan la geliyey Ciidanka Ugandha markii la helay Xog sheegeysa falal Argagaxiso
Dowlada Uganda oo ciidan qaas ah u soo dirtay Soomaaliya iyo AMISOM oo si kulul ugu hadashay
Dowladda Uganda ayaa sheegtay inay ciidammo gaar ah u soo dirayso Soomaaliya, kuwaasoo la shaqey doona Qaramada Midoobay, iyadoo taliska AMISOM uu arrintan si adag uga jawaabay.
Booliiska Uganda oo Shaaciyay inay heleen Xog sheegaysa inay Al-shabaab weerarro ka geysanayso Magaalada Kampala
Booliiska dalka Uganda ayaa sheegay in ay heleen xog ku saabsan in Al-Shabaab ay qorshaynayso inay weerarro ka geysato goobaha waxbarashada dalkaas, gaar ahaan xarummo Kampala ku yaalla.
Uganda oo Xabsiga dhigtay Askar iyo Saraakiil ka tirsanaa Ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya oo xatooyo lagu helay
Ugu yaraan 40 ka tirsan ciidamada dalka Uganda ee ka howlgalayay Soomaaliya oo uu ku jiro sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa la xiray, kaddib markii lagu helay xatooyo, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Uganda, Col. Paddy Ankunda.
Uganda ayaa heegankii ugu xooganaa ebad waxa ay gilisay Dalkeeda ka dib hanjabaadyo ka soo yeeray Shabaabta Soomaaliya.
Soomaalida ku dhaqan dalkaasi uganda iyo Dowlada oo ka wada hadlay xaalada amni ee dalkaasi.
Jaalliyadda Soomaalida ah ee ku nool dalka Uganda iyo saraakiisha ammaanka ee dalkaas ayaa maanta magaalada Kampala ku yeeshay kulan looga hadlay sidii la isaga kaashaan lahaa sugidda ammaanka.